Iplanethi engaqhelekanga yamatye kunye nezityalo ze-caramel nguDavid Brodeur | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Njengenxalenye yefayile yakho 'Uthotho lweZulu', igcisa ledijithali esekwe eChicago UDavid brodeur, Wadala umhlaba ongaqhelekanga ogcwele izityalo, amajikijolo, iikristali ezibengezelayo, kunye nee-orbs ezimile okweswiti Ihluma emhlabeni. Ngaphandle kokuyilwa kwayo okungaqhelekanga, iBrodeur ithembele kwimibala eqhelekileyo yeziqhamo ukwenza le ndawo yokuhlala UWilly Wonka, apho ungenakunceda kodwa ufuna ukufikelela kwaye uyikhuphe yonke.
UDavid brodeur Yiyo umlawuli woyilo, umlawuli wezobugcisa, uyilo kunye ne-animator. Unoxanduva lokugcina ukuthembeka kweempawu, ukuphuhlisa iikhonsepthi ngokubanzi, ukugcina ubudlelwane kunye nomthengi wokugqibela, kunye nokusebenza neqela ukuqinisekisa ukuba umbono wokuyila ohamba kuye uyahamba. Isiseko saso sigxile kuyilo lwegraphic kunye nonxibelelwano olunxibelelanayo. Eyona njongo yayo yoyilo lweMotion kunye neempawu zenkampani.
Unomdla wokudala kunye nokunceda abanye babe nobuchule ngakumbi kubuchule bokuyila, izikhokelo zoyilo, kunye nokubeka uphawu. Abaxhasi babo ziimpawu ezinje I-Dodge, i-BMW, ​​i-FOX, i-Starz, i-Intel, iVizio, i-Adobe, i-Beats Audio, i-North Face kunye neCallaway. Ngaphandle komsebenzi wabo banokufumana ukuchitha ixesha nosapho, ukuloba, ukuhamba nokuthatha iifoto, kunye nokwenza izinto ezininzi zangaphandle kangangoko kunokwenzeka. Phakathi kwamabhaso akhe 'Ophumeleleyo woNxibelelwano loBugcisa boNyaka ka-2014' kwaye ukhethwe njengonxibelelwano lwe 'Ikhosi yeAdobe Generation Professional yoPhando ngo-2014'.
Ungabona ngakumbi kwiiprojekthi Behance, kwaye upapasha iziqwenga zedijithali ezintsha mihla le Instagram.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iplanethi engaqhelekanga yamatye kunye nezityalo zeCaramel nguDavid Brodeur